Shiinaha iibka kulul 2 qof 4WD Saqafka Baabuurta Sare Teendhada Gawaarida Gawaarida Gawaarida Saqafka Sare Soo-saar iyo Warshad | Arcadia
Iibis Kulul 2 Qof 4WD Saqafka Gawaarida Sare Teendhada Gawaarida Gawaarida Gawaarida Sare
Gawaarida jilicsan ee gawaarida ee jilicsan ee dusha sare, si aad u nasato oo aad ugu raaxeysato banaanka. Laga soo saaray dharka tayada sare leh ee poly / suufka neefsashada leh, caaryadaada iyo biyo nadiifinta teendhada dusha sare waxay si fiican ugu habboon tahay saqafka 4 × 4. Jaranjaro adag oo aluminium ah oo la jiidan karo ayaa u oggolaaneysa marin fudud. Joodariyaashu waxay la yimaadaan furaash cufan oo cufkiisu yahay 65mm oo leh dabool la saari karo.
Iyada oo leh daaqado iyo albaabbo si buuxda loo baaray. ciidda u adkaysata iyo cayayaanka u adkaysta.
Gawaarida jilicsan ee gawaarida ee jilicsan ee dusha sare, si aad u nasato oo aad ugu raaxeysato banaanka. Waxaa laga soo saaray dhar nadiif ah oo tayo sare leh oo poly / suuf leh, caaryadaada iyo biyaha oo teendhada dusha ka saareysa biyaha si hagaagsan ugu habboon saqafkaaga 4x4. Jaranjaro adag oo aluminium ah oo la jiidan karo ayaa u oggolaaneysa marin fudud. Joodariyaashu waxay la yimaadaan furaash cufan oo cufkiisu yahay 65mm oo leh dabool la saari karo. Iyada oo leh daaqado iyo albaabbo si buuxda loo baaray. ciidda u adkaysata iyo cayayaanka u adkaysta.
Ku raaxayso noo kala duwan abid horumarinta iyo si joogto ah u hagaajinta wax soo saarka. Waxaan kuu ballan qaadaynaa oo aan hubinaynaa inaad hesho adeegga ugu fiican, wax soo saarka ugu fiican iyo dammaanad ammaan ah oo aad ku iibsato.
Hore: Tayada ugu fiican Shiinaha 4WD saqafka teendhada adag Shell Car Truck 2.3m Saqafka Sare Taambuugga Sare ee Aluminium Telescopic Tallaabada sallaan ee Camping iyo Safarka
Xiga: 3M 4M 5M 6M 7M Naqshad cusub naqshad dawanka shiraaca banaanka taambuugga teendhooyinka dawanka dawanka albaabka oo iib ah